Rafitra fandavahana orthopedic Arbutus - Medical Aid International
Rafitra fandavahana orthopedic Arbutus
Vahaolana tsotra sy maharitra
Ny rafitry ny fandavahana orthopedic mahazatra dia lafo ary matetika ny fandavahana iray dia matetika tsy ampy noho ny fotoana ilaina amin’ny fanadiovana sy fanafoanana ny sela.
Ny DrillCover marobe dia mamela ny be atao OR mba hanao fandidiana ambadika miaraka amina fandavahana tokana amin’ny fanoloana ny bateria fotsiny ary amin’ny fametahana ilay fandavahana ho fonosana vaovao tsy misy ilana azy.
Ny teknolojia Arbutus DrillCover dia mamadika fitaovana mavesatra sy matanjaka ho fitaovana fandidiana azo antoka sy mahomby izay manome hery mahery vaika ho an’ireo matihanina amin’ny fitsaboana.
Halaviro ny androm-piainan’ireo fitaovana fandidiana lafo vidy amin’ny alàlan’ny fanaronana azy ireo fotsiny mba tsy ho voan’ny fizotran’ny autoclave manimba.
Ny DrillCover Technology dia mampihena bebe kokoa ny vidiny alohan’ny fampitaovana teatra fandidiana amin’ny alàlan’ny famelana ireo fandidiana ambadika maro miaraka amina fitaovana mandeha amin’ny herinaratra tokana.
Safidy fitaovana telo samihafa:
Natao ho an’ny fitrandrahana tsy misy tafondro sy ny fitondrana fiara K-tariby fohy, tsipika steinmann na tsimatra fixator ivelany. ONy ptional AO mifamatotra haingana dia azo ampidirina ho an’ny fifanakalozana haingana ny karazana fandavahana karazana AO.
Ny fandavahana sy ny famerenana amin’ny laoniny dia azo atao amin’ny alàlan’ny adapter voaroaka. Izany dia manamora ny fampiasana amin’ny fametahana intramedullary ary koa pin sy tariby. Ity fandavahana mahery vaika ity dia mety ihany koa amin’ny famerenana amin’ny laoniny acetabular.
Ny SawCover System dia azo ampiasaina amin’ny Total Knee Arthroplasty (TKA) rehefa manolotra fikirakirana tsara sy ergonomika, izay mahatonga azy ho mifanaraka amin’ny fomba osteotomy isan-karazany, ao anatin’izany ny fomba taolana kely. Izy io koa dia azo ampiasaina amin’ny fanesorana ny loha femoraly ho an’ny Total Hip Arthroplasty (THA), fanapahana, fanangonana grefy ACL sy ny taolana.
Sintomy ny bokikely